Senegal: kudzokera kumusoro kwe "Mimi" Touré - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO »Senegal: kudzokera kumusoro kwe" Mimi "Touré - JeuneAfrique.com
Senegal: kudzokera kumusoro kwe "Mimi" Touré - JeuneAfrique.com
Akasarudzwa musoro wemari, Economic and Social and Environmental Council, iyo yaimbova Prime Minister weMacky Sall yava hutatu hwehutano hweSenegal. Kudzokera kunyasha dzinogona kusimbisa zvaanoda?
Vamwe vaifunga kuti aizoita kuti adzoke zvakare kuhurumende, achitevera kusarudzwa kweMacky Sall musi waFebruary 24. Asi ndiwo utungamiriri pamusoro Economic, Social uye Environmental (Cese) Aminata Touré chakamukazve chava Sangano, dzingirira nzvimbo namesake Aminata akareba, vakanga gurukota kakawanda, ipapo Munyori General yeVatungamiri, pasi Abdoulaye Wade. Maererano nekugara nguva dzose paimba yeRipublic, uyo aiva mushumiri wekururamisira (2012-2013) saka Macky Sall, gurukota rezvemitemo (2013-2014), rakaziviswa kuti "vakaramba kutarisira kudzokera kuhurumende."
In 2011-2012 2018-2019 sezvo mumwe wokuSenegal zita remadunhurirwa rokuti "Mimi" Touré rwakaita basa rinokosha pakuti musarudzo ari musoro wehurumende. Tinofanira kuona kwayo kusimudzirwa akangwara springboard kana gilded wadhiropu, panguva apo kissaa Sall, ndiani zvino wehurumende anoda kuva oga dzimwe chidhiraivho?
Cameroon: Gurukota rezveMari Louis Louis Motaze's Coup de Meu, neCamair-co ku Douala International Airport.